Nagu Saabsan - Qalabka Baakistaha Wershadda ee Wershadda Cas., Ltd.
Smart Weigh markii uu mashiinka xirmooyinka wejiga badan ka keenay 65 waddan. Smart Weigh waxaa la aasaasay 2012 iyada oo warshaddii ugu horreysay ay ku taallay magaalada Henglan, magaalada Zhongshan, Guangdong, Shiinaha, iyo suuq bartilmaameedka ka ah dibedda. 3 aasaasayaasha Smart Weigh ayaa mas'uul ka ah naqshadeynta mashiinka, barnaamijyada iyo suuqgeynta, ganacsiyada shirkadu si xawli ah ayey u kaceen sababtoo ah qeyb gaar ah, Smart Weigh waxaa loo wareejiyay 4500m2 warshad casri ah sanadkii 2017.
Baakadaha Mashiinka Xirmooyinka ee Smart Weigh, Co., Ltd waxay muddo dheer adkeynaysay bixinta miisaniyada quseysa oo otomaatig ah iyo xirmooyinka mashiinnada baakadaha oo qiime macquul ah ah. Tayada mashiinka iyo ku shaqeeyntiisa waxay dhistay xiriir wanaagsan iyo mid fog oo macaamiisha ah. Isla mar ahaantaana, waxaan nahay iskudhafka illaha! Micnaha waxaan siineynaa miisaanka, mashiinka wax lagu rido, wiishka, qalabka wax lagu baaro, miisaanka wax lagu hubiyo iyo wixii la mid ah.
Waxaan ku guuleysanay qaadashada mas'uuliyad dhammaystiran iyada oo hoos timaad HESHIISKA, JOOJINKA iyo INNOVATION!
Waxaan dul saaraynaa sidii aan u siin lahayn xalka saxda ah iyo ka sarreynta adeegga iibka macaamiisha kadib, waxaan hubineynaa inaan la kulanno baahiyahaaga ku saabsan iswada. Maaddaama ay tahay soo saare ku faan iyo soo-saare miisaanka toosan, miisaanka badan leh, isku-darka miisaanka toosan ee foomka buuxiya mashiinka baakadaha, mashiinka baakadaha ee meertada ah, qalabka wax lagu baaro, baareyaasha miisaanka iyo miisaanka baabuurta iyo nidaamyada buuxinta, waanu ku qanacnay xulashooyinkaaga waxaana naga go'an inaan ka badino waxyaabaha aad ka filayso .
warshad casri ah oo casri ah
miisaan culus oo noocyo badan leh oo jira
Awoodda sanadlaha ah ee xirmada xirmooyinka
24 × 7 saac
Tijaabada gabowga waxay xaqiijisaa xasilloonida mashiinka
Smart Weigh wuxuu dhex maraa miisaanka badan ee warshadaha cuntada qaaska ah, sida kimchi, bariis la shiilay, baastada, saladh, miraha cusub, hilibka, jiiska, keegga bariiska, sausage, isku darka lowska, nacnaca isku qasida iyo wixii la mid ah. oo si fiican khibrad ugu leh qorshaynta miisaanka khadadka mashiinka wax lagu duubo iyadoo lagu saleynayo dhirta macaamiisha.
Kooxda iibka ka dib oo leh 10 injineer oo xirfad leh ayaa taageera adeega dibedda ee iibka dibedda iyo adeegga internetka.